UHF project ၏ HIV ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေခြင်း။ – AHRN-Myanmar
UHF project ၏ HIV ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေခြင်း။
By AHRN IT — In Uncategorized — 22/07/2019
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံပေးမှု့နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီးတွင်းရှိ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်( ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ)တွင် UHF စီမံကိန်းသည် ကွင်းဆင်း စီမံချက်၁ခုကို ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ UHF စီမံကိန်း၏မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ၁ခုဖြစ်သော အာရှဒေသဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျှော့ပါးရေးအဖွဲ့ (AHRN) သည်ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၁၂ရွာတွင် မူးယစ်ဆေးအကြောတွင်းထိုးသွင်းသုံးစွဲသူများအကြား အန္တရာယ်လျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရွေ့လျားကွင်းဆင်း ဝန်ဆောင် မှု့များကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှု့များမှာ HIV ရောဂါနှင့် ပက်သက်သော ကျန်းမာရေးအသိ ပညာပေးများနှင့် ဆေးလွန်သေဆုံးမှု့များ မဖြစ်ပေါ်ရန် ပညာပေးပို့ချမှု့များတို့အပြင် စောစီးလျှင်မြန်စွာသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဟုမ္မလင်းမြို့ရှိ အမျိုးသားခုခံကျကာလ သားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန၏ ART ဆေးတိုက်ကျွေးရေးဆေးခန်း များသို့ ညွှနိးပို့ဆောင်ပေးခြင်း များဖြစ်ပါတယ်။
USAID HIV/AIDS Flagship (UHF) Project Expands HIV Services to Sagaing Region:
Following recommendations from the Ministry of Health and Sports, the UHF Project expanded outreach coverage to Homalin Township in Sagaing Region, located next to Kachin State. The Asian Harm Reduction Network (AHRN), an UHF partner, conduct mobile outreach across 12 villages in Homalin Township for people who inject drugs (PWID). AHRN mobile outreach services in Sagaing include health education on HIV and overdose management, HIV Rapid Diagnostic Tests (screening), counseling, and referrals to the National AIDS Program’s ART Center at Homalin Hospital.
Archives Select Month	July 2022 (1) June 2022 (37) May 2022 (5) April 2022 (1) March 2022 (2) February 2022 (2) February 2021 (1) December 2020 (3) November 2020 (4) October 2020 (1) September 2020 (2) August 2020 (1) July 2020 (7) June 2020 (3) May 2020 (6) April 2020 (11) March 2020 (3) February 2020 (2) January 2020 (2) December 2019 (2) October 2019 (1) July 2019 (11) November 2018 (2) October 2018 (6) August 2018 (3) July 2018 (4) April 2018 (1) September 2017 (3) August 2017 (1) July 2017 (8) March 2017 (7) October 2016 (16) September 2016 (10) February 2014 (6)